Vaovao - Famerenana amin'ny laoniny ny lambam-pandidiana sy ny akanjo fandidiana
Famerenana rafitra ny lambam-pandidiana sy ny akanjo fandidiana
Famerenana rafitra momba ny drapes fandidiana sy ny akanjo fandidiana
Mampiasà lamba famaohana loaka fandidiana mandritra ny fandidiana mba hisorohana ny fifandraisana amin'ny ambonin'ny latabatra fandidiana ary hihazonana ny fahamoran'ny tontolon'ny tontolo iainana, ny fitaovana ary ny manodidina ny marary. Toy izany koa, mandritra ny fandidiana, ny akanjo fandidiana tsy mandeha amin'ny laoniny dia tokony hitafy ny ekipan'ny dokotera ihany koa mba hitazomana ny fahamendrehan'ny faritra fandidiana ary hampihena ny risika hiparitahan'ny otrikaretina amin'ny marary sy ny mpiasa.
Ny akanjo fandidiana sy ny lamba famaohana amin'ny lavaka fandidiana dia vita amin'ny fitaovana maro na ampiasaina tokana. Amin'ny sokajy roa dia samy hafa ny endrika amam-bika sy ny fahombiazan'ny sokajy tsirairay, izay taratry ny fifanakalozana ilaina amin'ny toekarena, ny fampiononana ary ny ambaratonga fiarovana ilaina amin'ny asa manokana.
Mandritra ny fandidiana, raha lasa lena ny fitaovana drape dia mitombo ny risika amin'ny fifindran'ny pathogen. Noho izany, ny lamba famaohana misy tanjona marobe na kendrena tokana ampiasaina amin'ny asa fandidiana dia tokony ho afaka hisoroka ny fidiran'ny rano. Ireo fitaovana azo averina ampiasaina matetika dia misy lamba samy hafa voatenona sy / na landy voatenona, na lamba hafa izay mety afangaro amin'ny polyester sy / na fitsaboana simika. Ireo vokatra ireo dia tsy maintsy maharitra. Ny lamba famaohana fandidiana azo ampiasaina sy ny akanjo fandidiana dia matetika vita amin'ny lamba tsy tenona vita amin'ny akora synthetic sy / na akora voajanahary, ary mety notsaboina simika.
Rehefa vita ny fanomanana ny toerana fandidiana dia ampiasao lamba famaohana tsy misy tenona mpitsabo, lamba famaohana tsotra na servieta lavaka nofehezina tamina mpitsabo mpanohitra (indrindra ny iodophor) amin'ny hoditry ny marary. Ity sarimihetsika ity dia miraikitra amin'ny hoditra, ary ny mpandidy dia manapaka ny hoditra ary manarona azy avy eo. Raha teorika dia heverina ho sakana mekanika sy / na mikraoba izy io mba hisorohana ny mikraoba tsy hifindra monina avy amin'ny hoditra mankany amin'ny toerana fandidiana.
Ny "Toro-làlana SHEA / IDSA" navoaka tamin'ny 2014 dia nanoro hevitra fa tsy tokony hampiasaina ho paikady mahazatra hisorohana ny SSI 8. Mandritra izany fotoana izany, ny British National Health Association The Institute of Health Care (NICE) namoaka torolàlana tamin'ny 2008, nanoro hevitra fa raha lamba lamba famaohana loaka mitambatra no ilaina, dia lamba famaohana iodofor no tokony hampiasaina.